थाईल्यान्डको ब्याकप्याकरको रूपमा यात्रा गर्नका लागि गाईड Absolut यात्रा
थाईल्याण्डमा ब्याकप्याकरको गाईड
रियान | | अरूलाई
थाईल्याण्ड यो संसारमा सबैभन्दा धेरै भ्रमण गरिएको गन्तव्य हो। एक देश जसले अपमानजनक मूल्यहरूमा यस अद्वितीय स्थान द्वारा प्रस्ताव गरिएका सम्भावहरूको साथ ब्याकप्याकरहरूलाई हर्षित गर्दछ। किनभने, हो, यदि तपाईं थाईल्यान्डको ब्याकप्याकरको रूपमा यात्रा गर्नुहुन्छ भने तपाईंले थोरै खर्च गर्दा धेरै आनन्द लिन सक्नुहुन्छ।
म २ personal दिन पछि थाईल्याण्डमा १,००० युरोको राउन्डट्रिप उडानहरू, साथै आन्तरिक उडानहरू सहित विभिन्न क्षेत्रमा भ्रमण गर्नका लागि सहितको ब्यक्तिगत अनुभव दिन सक्छु। थप विज्ञापन बिना म तपाईंलाई हाम्रो साथ छोड्दछु एक backpacker को रूप मा थाईलैंड को यात्रा गर्न मार्गदर्शन।
1 थाईल्याण्डको भ्रमण गर्नु अघि जान्नुपर्ने चीजहरू
1.1 थाईल्यान्डमा मेरो ब्याकप्याकिंग यात्रामा के ल्याउने?
1.2 थाइल्याण्डमा पैसा
1.3 कुन अपरेटर संग उडान गर्न
1.4 थाईल्याण्डको लागि भ्याकेसनहरू, भिसा र राहदानीहरू
2 थाईल्याण्डमा भएपछि के थाहा हुन्छ
2.1 थाई मानिसहरु कसरी छन्
2.3 थाईल्याण्डमा ह्याग्लिling
2.4 इन्टर्नेट र मोबाइल डाटा
2.5 थाइल्याण्डमा पानी र खाना
2.6 थाईल्याण्डमा के हेर्ने?
थाईल्याण्डको भ्रमण गर्नु अघि जान्नुपर्ने चीजहरू
ठीक छ, म यसलाई विभाजित गर्न जाँदैछु थाईल्यान्डको बारेमा गाइड दुई भागहरूमा: थाईल्याण्ड जानु अघि तपाईलाई के जान्नुपर्दछ र थाईल्याण्डमा गए पछि तपाईले के जान्नुपर्दछ। र त्यहाँ धेरै धेरै महत्त्वपूर्ण पोइन्टहरू छन् जब यो देशको लागि तपाईंको सुटकेस प्याक गर्ने कुरा आउँछ: कुन कम्पनीको साथ म टिकट लिन्छु? म कहाँ अवतरण गर्छु? थाईल्याण्डमा कुन मुद्रा प्रयोग गरिन्छ? म मेरो झोलामा के लिन्छु? के म होटल बुक गर्दछु?
थाईल्यान्डमा मेरो ब्याकप्याकिंग यात्रामा के ल्याउने?
यो एक मिलियन प्रश्न हो। थाईल्याण्डमा के ल्याउने? पहिलो कुरा एउटा ब्याकप्याक छनौट गर्नु पर्दछ किनकि मेरो धारणा छ कि कम्तीमा बाहिर निस्कँदा, भित्र जाँच गर्नु पर्दैन। त्यहाँ धेरै विकल्पहरू उपलब्ध छन् त्यसैले म यसलाई तपाईंको छनौटमा छोडिदिन्छु। मैले व्यक्तिगत रूपमा डेकाथ्लनमा जान्छु र liter back लिटर ब्याकप्याक किन्नको लागि रोजेको थिएँ, मैले बोक्न चाहेको सबै भन्दा बढी।
जुत्ताको बारेमा, यो थाइल्याण्ड मा धेरै तातो छ र सबैजनाले फ्लिप फ्लप लगाइरहेका छन्। यदि थाईले यी जुत्ताहरू लगाए भने, यो केहिको लागि हो त्यसैले हिचकिचाउँनुहोस् र फ्लिप फ्लपको एक जोडी लिनुहोस्, वा तिनीहरूलाई त्यहाँ खरीद गर्नुहोस्, तपाईं तिनीहरूलाई कहिँ भेट्टाउनुहुनेछ। यदि तपाइँ ट्रेकि go जान चाहानुहुन्छ, थाईलैंडमा लगभग अनिवार्य केहि, म बन्द तर सास फेर्न जुत्ता किन्न सिफारिस गर्दछु। मैले डेकाथ्लनबाट चप्पल पनि रोजें र नतीजा निकै राम्रो भयो। अवश्य पनि, केहि हप्ता अघि उनीहरूलाई कोशिस गर्नुहोस् ताकि खुट्टाले उनीहरूलाई प्रयोग गर्न सकोस् र तपाईं कष्टकर फोडाबाट बच्न सक्नुहुन्छ।
सुटकेसको बाँकी ठाउँका लागि, मैले लिने मामलामा तीन शर्ट, दुई प्यान्ट र तीन दिनका लागि लुगा परिवर्तन। कि संग मसंग पर्याप्त भन्दा बढी थियो। कुनै पनि होटेलमा तपाईलाई धुलाई सेवा भेट्टाउनुहुनेछ जुन डिटर्जेंट सहित २ यूरोका लागि तपाईलाई सबै लुगा धुने अनुमति दिनेछ। एउटा विवरण: नुहाउने तौंली नलिनुहोस्। यो अनावश्यक प्याकेज हो र तपाईं त्यहाँ एक किन्न सक्नुहुन्छ र यसलाई स्मृति चिन्हको रूपमा फिर्ता गर्न सक्नुहुनेछ।
क्यारी प्राथमिक उपचारको सामान यो नराम्रो विचार होईन, तर मैले तपाईंलाई पहिल्यै बताइसकेको छु कि कुनै Ele इलेवनमा तपाईले अरू केहि पनि भेट्टाउनुहुने छैन, तर यी प्रकारका स्टोरहरू जताततै छन्, तपाईं प्यारासिटामोल, ब्यान्डिज, प्लास्टरहरू र अन्य खरीद गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईको ब्याकप्याक संगठित गर्ने बेला दिमागमा राख्नुपर्ने सब भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो, यदि तपाई थाइल्याण्डको वरिपरि धेरै जान चाहानुहुन्छ भने आदर्श भनेको यसलाई सकेसम्म हल्का राख्नु हो। हराएको शहर को बाटोको धुलो सडकमा घाममा केही घण्टा हिडे पछि, तपाईंले यसको कारण बुझ्नुहुनेछ।
अन्तमा, यो सम्झनुहोस् कि एयरपोर्ट नियन्त्रणमा उनीहरूले तपाईंलाई लिने सबै लोशनहरू फ्याँक्छन् र नियमहरू उल्ल .्घन गर्दछन्, त्यसैले सनस्क्रीन मुद्दा र अन्यले यसलाई सिधा थाईलैंडमा खरीद गर्दछ जहाँ मूल्य स्पेनमा समान छ।
La थाईल्याण्डमा आधिकारिक मुद्रा छ स्नान। स्पष्ट रूपमा सिक्काको मान परिवर्तनशील हो, तर तपाइँलाई एक विचार दिनb35 भाट १ युरो छ। म रूपान्तरण हुँ जुन मैले सँधै प्रयोग गर्थें किनकि प्रत्येक उत्पादको मूल्य जान्न यो सजिलो थियो
अर्को महत्त्वपूर्ण विवरण मुद्रा विनिमयको मुद्दा हो। कुनै पनि परिस्थितिमा तपाईं आफ्नो मूल देशको स्नानको लागि युरो साट्ने एक बैंकमा जानुहुन्न। सबैभन्दा सुरक्षित कुरा यो हो कि तपाईं भित्र पस्नुभयो बैंकक, थाईल्याण्डको राजधानी, र उही एयरपोर्टमा थुप्रै विनिमय घरहरू छन् जुन स्पेनको तुलनामा धेरै राम्रो अनुपात प्रदान गर्दछ। हो, स्पेनी बैंकहरूले तपाईंलाई मुद्रा परिवर्तनको लागि राम्रो कमिसन चार्ज गर्न लाग्दछ र थाईल्यान्डमा पैसा परिवर्तन गर्न यो अधिक सुविधाजनक छ। साथै, एक पटक तपाईं होटलमा जानुहुँदा थाई बैंक भेट्टाउन सजिलो हुनेछ।
अर्कोतर्फ, वाणिज्यिक क्षेत्रहरूमा तपाईंले पनि एक फेला पार्नुहुनेछ धेरै राम्रो विनिमय दर, चिन्ता नगर्नुहोस् किनभने तिनीहरूले तपाईंलाई घोटाला गर्नेछैनन् वा कुनै आयोग चार्ज गर्दैनन्। थाईल्याण्ड पर्यटन मा दूर रहन्छ र म पहिले नै तिमीलाई भन्छु कि पर्यटकहरु राम्रो व्यवहार गर्छन्।
कुन अपरेटर संग उडान गर्न
त्यस समयमा म कुन कम्पनीसँग थाईल्यान्डको लागि उडान गर्ने खोजी गर्दै थिएँ र अन्तमा मैले विकल्प रोजें कतार एयरवेज। त्यहाँ धेरै कम्पनीहरू छन् जुन थाईल्याण्डमा उडान गर्दछन्, तर व्यक्तिगत रूपमा मैले कतारलाई छनौट गरेको थिए किनकि बार्सिलोनाबाट थाईल्यान्डको उडान 5506यूरो हो र दोहामा स्टपओभर बनाएको तथ्यका कारण। यस तरिकामा ऊसँग6घण्टा उडान, दुई घण्टा ब्रेक र थाईल्याण्डको लागि 350 घण्टाको उडान थियो। यात्रा धेरै रमाइलो बनाइएको थियो र विमान प्रयोग गरियो, एक एयरबस ए XNUMX०, अर्थव्यवस्था वर्गमा गए पनि सान्त्वनाको मामलामा एक साँचो पास थियो।
जे भए पनि, म सिफारिश गर्दछु कि तपाईं अनलाइन हेर्नुहोला कि यदि तपाईंलाई कुनै चाखलाग्दो प्रस्ताव फेला परेको छ किनकि थाईल्यान्डमा उडान गर्ने एयरलाइन्सहरू धेरै शक्तिशाली छन् भनेर विमानहरूको फ्लीटबाट।
थाईल्याण्डको लागि भ्याकेसनहरू, भिसा र राहदानीहरू
स्पष्ट रूपमा तपाईलाई थाईल्याण्डको लागि पासपोर्ट चाहिन्छ। तर तपाइँ भिसा वा खोपका बारे चिन्ता लिनु पर्दैन। मैले भनेको जस्तै, थाईल्याण्डको लागि तपाईलाई भिसा चाहिदैन केहि लामो रूपमा तपाईं अधिकतम days० दिनको लागि देशमा हुनुहुन्छ।
यसको लागि vaccinations, थाईल्यान्ड एक धेरै आधुनिक देश हो त्यसैले तपाईं यस पक्षको बारेमा चिन्ता लिनुहुन्न जबसम्म तपाईं ज deep्गलमा जानुहुन्न, जो असम्भव छ। अधिकमा तपाईं पहेंलो ज्वरो लगाउन सक्नुहुन्छ, तर म तपाईंलाई पहिले नै भन्दछु कि यो आवश्यक छैन।
तपाईको थाइल्याण्डको यात्राको सब भन्दा महत्वपूर्ण बुँदाहरू होटेलहरू हुन्। यस अवस्थामा, विशेष गरी यदि तपाइँ ब्याकप्याकिंग गर्दै हुनुहुन्छ भने, म तपाइँलाई बैंककमा दुई रात बिताउनको लागि होटल बुक गर्न सिफारिश गर्दछु। बुकिंग जस्ता सेवाहरूको माध्यमबाट खोजी गर्न जानुहोस् कोठा खोज्दै तपाईंलाई विचार दिनको लागि, मैले एयर कंडीशनिंगको साथ डबल कोठाको लागि प्रति रात -6-१० यूरो भुक्तान गरें, तर यदि तपाईं सकेसम्म थोरै खर्च गर्न चाहानुहुन्छ भने तपाईं सधैं एक साझा कोठा प्रति रात १ युरो रोज्न सक्नुहुन्छ। र, तपाईले पछि देख्नुहुनेछ, थाईल्याण्डमा मूल्यहरू हाँसोयोग्य छन्।
थाईल्याण्डमा भएपछि के थाहा हुन्छ
लेखको दोस्रो भागमा जानुहोस् जहाँ म थाईल्यान्डको बारेमा तपाईंलाई थोरै बताउन चाहन्छु। यस पक्षमा म मानिसहरू, खाना र सामान्य संस्कृति थाईलैंड मा कुरा गर्नेछु। समस्यामा पर्नुहोस्
थाई मानिसहरु कसरी छन्
त्यो भन्नु थाईल्याण्ड मुस्कानको देश हो यो स्टीरियोटाइप होइन तर वास्तविकता हो। मैले आफ्नो जीवनमा बढी रमाईलो र सहयोगी मानिसहरूलाई देखेको छैन। हामी एउटा सडकबाट तल जाँदै थियौं र केही कार र मोटरसाइकल हाम्रो मार्गको बाटोमा हामीलाई रोक्न रोकियो। कि संग म यो सबै भन्छु।
समस्या भाषा हो। जति थाइल्याण्डमा तपाईले पढ्नु भएको भए सबैले अ everyone्ग्रेजी बोल्ने भएकोले तपाईलाई समस्या हुने छैन, यदि तपाई ब्याकप्याकरमा जानु हुन्छ भने फरक फरक हुन्छ। व्यावसायिक क्षेत्रमा तपाईलाई अ speaking्ग्रेजी बोल्न समस्या हुँदैन, तर पर्यटन क्षेत्रबाट टाढा, तपाईंसँग भाषाको समस्या हुनेछ। जे भए पनि, मैले स perfectly्केतहरूले आफूलाई पूर्ण रूपमा बुझें।
केहि पनी पछाडि खानालाई औंल्याउनु जस्तै तपाईले समान खाना चाहानुहुन्छ भन्न को लागी। र थाईससँग तपाइँलाई बुझाउने प्रयास गर्नु यो रमाईलो हो। तपाईंले देख्नुहुनेछ कि उनीहरूले धेरै भाग लिएका छन्।
थाइल्याण्डमा मानिसहरू धेरै शान्त छन् र चिच्याउन मन पराउँदैनन्। हामी स्पानियर्डहरू कसरी हौं भनेर हामीलाई थाहा छ, त्यसैले सामान्य भन्दा कम बोल्ने प्रयास गर्नुहोस् र गडबडी नगर्नुहोस्। पार्टीको क्षेत्रमा सदोम र गमोराले शासन गरेको यस संसारमा अलग्गै छ तर यस क्षेत्र बाहिर आदर महत्त्वपूर्ण छ। रिसाएको थाई भन्दा खतरनाक केहि छैन। मलाई ध्यान दिनुहोस्। एक थाई धेरै धैर्यवान हुनेछ जब सम्म उहाँ अब गर्न सक्नुहुन्न। र जब ऊ अब गर्न सक्दैन उसले तपाईंलाई चिच्याउनेछैन, तर वास्तवमै आक्रामक हुनेछ।
म यो भनिरहेको छैन किनकि थाईल्याण्ड खतरनाक छ। केहि यथार्थबाट अर्को छैन। यो मैले सुरक्षित हेरेको एक सुरक्षित देश हो, तर ly०० स्नानगृहहरूको लागि ड्युटीमा ट्याक्सी चालकसँग हेग्गल नगर्नुहोस् किनकि यदि तपाईंले उसलाई पिस्नुभयो भने, तपाईंलाई समस्या हुन सक्छ।
थाईल्याण्डमा ट्याक्सीहरूको विषय एक पृथक संसार हो। बैंककको बाहिर जहाँ कुनै ट्याक्सी ड्राइभरले मीटर राख्दछ जब तपाईं अघि बढ्नुहुन्छ तपाईं एक मिटर बिना ट्याक्सी चालकहरू देख्नुहुनेछ र प्रसिद्ध टुक टुकका साथसाथै केही रातो भ्यानहरू जुन अन्य प्रयोगकर्ताहरूसँग साझा ट्याक्सीको रूपमा कार्य गर्दछ। एक नजर राख्नुहोस्। यी ट्याक्सीहरू सहरका वरिपरि घुम्न धेरै राम्रो हुन्छन्, तर समस्याहरूबाट जोगिनका लागि सँधै मूल्यमा सहमत हुन्छन्। अधिक फुकेत जस्ता पार्टी क्षेत्रमा जहाँ तपाईं ट्याक्सी ड्राइभरहरूको साथ वास्तविक समस्या हुन सक्छ।
थाईहरू ह्यागल गर्न मनपर्दैन। गाईडहरूले पहिले नै मास भन्न सक्दछन्, जुन सत्य होइन। जब तपाईले देख्नु भएको ठाउँमा तपाईले मोलतोल गर्न सक्नुहुनेछ, वैसे पनि, तपाईले अधिकतम १ युरो बचाउनु भएको छ, यो पर्यटकहरुका लागि विशिष्ट बजारमा हुनेछ त्यसैले तपाईले त्यहाँ १० यूरो किन्नु भएको उपहार भेट्न सकिन्छ। आधा मूल्य मा टूरिस्ट क्षेत्र देखि टाढा अर्को ठाउँमा।
र त्यहाँ नैतिक मुद्दा छ। थाईल्यान्ड धेरै गरिबी भएको देश हो र म तपाईंलाई पहिले नै भन्दैछु कि उपहारमा १ यूरो बचत गर्न मलाई यो लाग्छ कि हेग्लि avoid बेवास्ता गर्नु र अनौंठो देशको आनन्द लिनुमा ध्यान केन्द्रित गर्नुको सट्टा तपाईले मनपराउने काठको हात्तीको लागि समय बर्बाद गर्नुको सट्टा बर्बाद गर्नु हो।
इन्टर्नेट र मोबाइल डाटा
मेरो लागि यो थियो तपाईंको मोबाइलमा डाटा जडान हुनु आवश्यक छ, मुख्य कारण यो थाईल्याण्ड मार्फत मेरो मार्गदर्शन गर्न मेरो व्यक्तिगत जीपीएस हुने थियो। यहाँ म सुझाव दिन्छु कि तपाईं एयरपोर्टको बक्समा जानुहोस् र कुनै पनि टेलिफोनी स्थितिमा e० यूरो को लागी डाटाको एक महिना भाडामा लिनुहोस्। त्यहाँ योग्य कर्मचारीहरू छन् जसले तपाईंको लागि प्रीपेड कार्ड माउन्ट गर्छन् र फोनलाई काममा छोडिदिन्छन्।
अनुभवबाट म तपाईंलाई भन्दछु कि केहि यूरो बचत गर्नु र सुपरमार्केट वा टेलिफोन स्टोरमा प्रिपेड कार्ड किन्न लायकको छैन, जब तपाईं डाटा गुमाउनु हुन्छ, तपाईंलाई नयाँ दरहरू सक्रिय पार्न वास्तविक समस्या हुनेछ। थोरै पैसा तिर्नु उत्तम हो र यस सम्बन्धमा समस्या नपर्न। म तपाईंलाई अनुभव बाट भन्छु।
को विषयवस्तु थाइल्याण्ड मा इन्टरनेट तपाईले धेरै चिन्ता गर्नु पर्दैन। नेटवर्कहरू एकदम राम्रोसँग काम गर्दछन् र इन्टरनेट नेटवर्क प्रयोग गर्नका लागि विभिन्न होटलहरूमा मलाई कुनै समस्या भएन। त्यहाँ सडकमा वाईफाई नेटवर्कहरू पनि खुला छन्, त्यसैले तपाईले त्यस पक्षको बारेमा चिन्ता लिनु हुँदैन।
थाइल्याण्डमा पानी र खाना
थाइल्याण्डमा पानी पिउन योग्य छैन। तपाईं सिधै नलको पानी पिउन सक्नुहुन्न वा तपाईं ओछ्यानमा राम्रो ग्यास्ट्रोएन्टेरिटिसको मजा लिदै केही दिन खर्च गर्नुहुनेछ। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं कुनै पनि सुपरमार्केटमा बोतलको पानी किन्न सक्नुहुन्छ वा थाईल्याण्डमा छरिएका पानी वितरण गर्ने मेसिनहरूमा जान सक्नुहुन्छ, तपाईं तिनीहरूलाई निरन्तर देख्नुहुनेछ, र bath स्नानगृहमा तपाईंले समस्या बिना १.5लिटरको बोतल भर्न सक्नुहुन्छ।
म एक साँचो प्रशंसक हुँ मसलादार खाना थाईल्याण्ड मा मलाई ठूलो समस्या छैन। अवश्य पनि, म त्यहाँ आईपुग्ने बित्तिकै मैले फार्मेसीमा एन्ट्यासिड किनें। र म निश्चित छु कि यसले मेरो जीवनलाई एक भन्दा बढी पटक बचाएको छ किनकि मैले कुनै समस्या बिना सबै प्रकारको मसलादार खानाको आनन्द लिएको छु। थप रूपमा, थाइल्याण्डमा खाना एकदम सस्तो छ, कुनै पनि सडकमा तपाईले एउटा स्टाल भेट्टाउनुहुनेछ जहाँ उनीहरूले मासु, माछा वा तरकारीहरू ग्रील गरिरहेका छन्, त्यसकारण यस देशमा ग्यास्ट्रोनोमिक प्रस्ताव वास्तवमै पूर्ण छ।
थाईल्याण्डमा के हेर्ने?
म थाईलैंडमा भ्रमण गर्न सकिने सबै कुराको व्याख्या गर्दै अर्को लेख लेख्न सक्छु। त्यहाँ थाईलैंडमा तपाईको छुट्टिहरु अनौंठो तरीकाले ब्याकप्याकरको रूपमा रमाइलो गर्न धेरै सम्भावनाहरू छन्, त्यसैले म सुझाव दिन्छु कि तपाईले शान्तपूर्वक अनलाइन खोजी गर्नुभयो किनकि प्रस्ताव वास्तवमै विविध छ। मैले थाईलैंडलाई दुई भागमा विभाजित गरें, उत्तर र दक्षिण। उत्तरमा जहाँ अधिक प्रकृतिको साथ भाग चियांग माई जस्ता प्रभावशाली शहरहरूसँग छ, अनौंठो ठाउँहरू जहाँ तपाईं यो देशको रमाइलो मान्नुहुनेछ।
यदि तपाइँ सूर्य र समुद्र तट हो भने कोह थाओ, पट्टाया, Pukhet जहाँ दक्षिण जाने मा ध्यान दिनुहोस् र थाइल्याण्डमा अन्य समुद्र तट क्षेत्रहरू। दिमागमा राख्नुहोस् कि यी क्षेत्रहरू सब भन्दा टुरिष्ट हुन्छन् ताकि तपाईंले यसको मूल्यमा ध्यान दिनुहुनेछ। फरक ठूलो छैन तर यो ध्यान दिएर छ। र केहि छैन, म आशा गर्दछु थाईल्यान्डमा ब्याकप्याकिंगका लागि यस गाइडले तपाईंलाई केहि मद्दत गरेको छ। सबै भन्दा माथि, खुला मनको साथ जानुहोस् र एक अविस्मरणीय ठाउँमा एक अद्वितीय यात्राको मजा लिन इच्छुक।
लेखको पूर्ण मार्ग: Absolut यात्रा » थाईल्याण्डमा ब्याकप्याकरको गाईड
रसियाको रातो वर्ग